Soo saarista Sariirtaada sariirtaada Sariirta iyo Warshadda | Huade
Tuujinta sariirtaada waa nidaam kaydinta maareynta maaddada oo loogu talagalay in lagu keydiyo alaabada laxray. Waxaa jira noocyo badan oo ah sariirtaada sariirta, xarkaha xulashada ayaa ah nooca ugu caansan, kaas oo u oggolaanaya in lagu keydiyo walxaha palletized ee safafka jiifka leh heerar kala duwan. Gawaarida forklift waxaa badanaa looga baahan yahay inay dhigaan suumanka la rakibo rakibayaasha si ay u keydiyaan. Rikoodhka sariirtaada waxay noqdeen cunsur caan ku ah bakhaarada casriga ah badankood, tas-hiilaadka wax soo saarka, dukaamada waaweyn, iyo tas-hiilaadka kale ee keydinta iyo qaybinta. Dhammaan noocyada kala-baxa santuuqa ayaa kordhiya cufnaanta keydinta alaabta la keydiyay. Kharashyada laxiriira qashinku waxay kordhayaan cufnaanta keydinta oo sii kordheysa.
Takoorida sariirtaada xulashada caadiga ah ayaa ah tan ugu badan, nidaamka caanka ka ah suuqa. Bixinta marin tooska ah ee forklifts kasta iyo santuuqa kasta, oo ay weheliso decking silig, bar taageero ama khaanadaha shelf, rafashada santuuqa ayaa ah xalka ugu fiican ee bakhaarada leh alaabooyin kala duwan oo ku yaal santuuqa. Dhererka sagxadda, dhererka dogobaka iyo ballacyada jidadka ayaa loo qaabeeyey forklifts, cabbirrada santuuqa iyo cabbirka bakhaarka, qaabdhismeedkuna waa la ballaadhin karaa.
Qaybaha guud ee nidaamka dharbaaxada sariirtaada:
Xamuulka xamuulka sida dogobka tallaabada ama dogobka sanduuqa Wareegyada toosan
Xargaha jajabka iyo xargaha xargaha Taageerada sariirtaada
Decking silig Kabaha
Taarikada shim Xawaaraha safka
Difaaca tiirarka Biraha ilaalada
Faa'iidooyinka haraaga sariirtaada:
Si fudud loo ballaadhin karo
La qabsiga noocyada noocyada kala duwan ee culeyska, sida culeyska iyo mugga
Isku dar khaanado dhaadheer oo gacmeed oo alaab ah
Rakado laba-qoto-dheer (4 gadaal gadaal-gadaal u ah 2) ayaa la codsan karaa si loo kordhiyo awoodda keydinta
Nidaamka haynta cidkale ee aadka u cidhiidhiga ahi wuxuu ka tagayaa marinka cidhiidhiga ah ee forklifts gaar ah, isagoo kordhinaya cufnaanta keydinta
Huade sariirtaada sariirtaada waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo xoog badan taasoo micnaheedu yahay qaab dhismeedka waa mid adag, lagu kalsoonaan karo oo ammaan ah. Soo-saarista sariirtaada sariirta ayaa muddo dheer ka mid ahayd meelaha muhiimka ah ee khibradda Huade.
Khubaradeenna racking-ka ayaa kula shaqeyn doona adiga si aad u xulato xalka ugu fiican ee keydinta oo ay ku taageeri doonaan mar walba iyada oo loo marayo dhammaan wejiyada mashruuca.
Hore: Nidaamka Racking Shuttle
Xiga: Raaxada Cantilever